Tilmaamaha Adobe Illustrator iyo Marinnada Joogtada ah ee aadan ka ogaan karin | Abuurista khadka tooska ah
Melissa Perrotta | | Khayraadka, Tababarada
Waxaan ognahay in si hufan loo qaabeeyo ay lagama maarmaan tahay in aqoon ballaaran loo yeesho barnaamijyada kombiyuutarka ee aan adeegsanno. Si kastaba ha noqotee, si kasta oo aan u tixgelinno nafteena khubarada barnaamijka, marwalba way jiri doontaa waxyaabo cusub oo la ogaado.
Sidan ayaan dhowr u soo diyaarinnay Xeeladaha Abobe Illustrator iyo toobiyeyaasha taas oo aan ku qorneyn qodobbada ay softiweerku soo jeedinayaan. Waxaan rajeyneynaa inay kaa caawin doonaan inaad fududeyso oo aad hagaajiso socodkaaga shaqada.
1 Beddel qaabka cutubka
2 Muuqaalka Pixel
3 U adeegso Calaamadda Buufinta si aad u abuurto qaabab kala sooc ah
4 Si dhakhso leh u xulo dhammaan walxaha midab leh
5 Habee qalabkaaga
6 Ka faa'iideyso waraaqaha shaqada
7 Dhaqso u beddel muuqaalka midabka
Beddel qaabka cutubka
Waad beddeli kartaa cutub-hawleedka xajmiga cabbirka adoo samaynaya midig u guji xukunka.
Mid ka mid ah dhibaatooyinka aan heysano ayaa ah in marka aan la shaqeyneyno muuqaalada vector-ka aan aaminsanahay in qeexida shaqadeenu ay tahay tan ugu fiican. Dhibaatada tan ayaa ah in markaan u dhoofineyno qaabka JPG ama PNG aan helno sawirada pixel sidaas darteedna tayada shaqadu way yaraan kartaa marka la barbar dhigo midka aan aragno marka aan ka shaqeyneyno vector.
Marka si loo helo horudhac sawirka ah pixel waan gujin karnaa Cmd + Optn + Y
U adeegso Calaamadda Buufinta si aad u abuurto qaabab kala sooc ah
Waxaad ku abuuri kartaa qaabab naqshadahaaga ah adoo isticmaalaya scalaamadaha tukado (Shift + S). Si tan loo sameeyo, waa inaad marka hore sawirtaa qaabka aad rabto, ka dibna fur tabta calaamadaha oo inta aad dooranaysid qaabka aad abuurtay waa inaad gujisaa astaanta "Astaan ​​cusub", cadee dejimahaaga qaabdhismeedkaaga, ka dibna xulo qalabka "Symbol spray" aaladda oo ku isticmaal meelaha lagu hadhsado ama lagu hagaajiyo.
Si dhakhso leh u xulo dhammaan walxaha midab leh
Khiyaanadan ayaa muhiim u ah fududeynta socodka shaqada marka la sameynayo walxaha midabka adag, astaamaha ama astaamaha. Tan awgeed waxaa lagama maarmaan ah oo keliya inaad gujiso sixir (Y) oo ku dheji midabka aan dooneyno inaan doorano. Qaabkan waxaan ku soo xulaynaa cunsurro midab ahaan loo ururiyey si loo awoodo wax ka beddel kooxda oo dhan si dhakhso leh. Waan isticmaali karnaa haddii aan dooneyno inaan beddelno cabbirka, midabka, goobta, dhumucda khadadka ama guryaha kale. Waxay kaloo shaqeysaa hadaan rabno inaan ka takhalusno canaasiirta.
Waxay kuxirantahay nooca shaqada aad qabato, waxaad dooran kartaa inaad haysato qalabka aad ugu baahan tahay gacanta. Dareenkan, waad awoodi kartaa shakhsiyeeyo goobta shaqada sida ku cad waxqabadka aad ku horumarinayso. Sawireyuhu wuxuu tusi doonaa aaladaha horay loo qeexay ee laxiriira howlaha kaladuwan ee naqshadeeye sida caadiga ah uu ku shaqeeyo, laakiin sidoo kale waad naqshadeyn kartaa booskaaga si aad uhesho waxtarka.
Tan awgeed waa inaad gujisaa batoonka «Waxyaabaha muhiimka ah» dhinaca kore ee midig. Kadib dooro "goob shaqo oo cusub."
Ka faa'iideyso waraaqaha shaqada
Xaqiiqda inay jiraan kuwo kala duwan waraaqaha shaqada (Shift + O) Sawirka wuxuu noo fududeynayaa nolosheena. Tani waa sababta oo ah waxay naga caawineysaa inaan awood u yeelano inaan soo jeedino waxyaabo kale oo beddel u ah mashruuc aan si fudud wax uga beddeli karno. Gaar ahaan haddii aan sameyneyno naqshadeynta astaanta, maadaama ay noo oggolaaneyso inaan keydinno, inaan awoodno u dhoofi mid kasta oo ka mid ah xaashidan sidii JPG ama PNG u gaar ah.
Dhaqso u beddel muuqaalka midabka
Tani waa toobiye kale oo aan la garanaynin, kaliya dhagsii Shift + guji aagga midabka imisa jeer ayaad u baahan tahay inaad ku tagto astaanta aad raadineyso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tababarada » Adobe Illustrator tabaha iyo toobiyeyaasha laga yaabo inaadan aqoon
Alejandro Garcia Ri
Jawaab Jose Garcia